आइतबार ७ हजार २ सय ११ संक्रमित थपिए, २७ को मृत्यु - Sankalpa Khabar
आइतबार ७ हजार २ सय ११ संक्रमित थपिए, २७ को मृत्यु
१९ बैशाख १७:०८
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा ७ हजार २ सय ११ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन भने १६ सय १२ संक्रमित कोरोनामुक्त भएका छन । २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण २७ जनाले ज्यान गुमाएका छन ।
१६ हजार ७ सय ७० जनाको पीसीआर परिक्षण गर्दा ७ हजार २ सय ११ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । यसै गरी ६ सय २३ को एन्टिजेन्ट परिक्षण गर्दा ७४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । जसमध्ये ४२ सय ७३ जना पुरुष र २८ सय ७३ जना महिला संक्रमित छन । यो संगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या ३ लाख ३६ हजार ३० पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा ३६ं४७ प्रतिशत महिला र ६३.५३ प्रतिशत पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
हालसम्म २ लाख ८३ हजार ९९४ जना संक्रमित निको भइसकेका छन । नेपालमा कोरोना संक्रमित निकोहुने दर ८४ं.५ प्रतिशत छ । क्वारेन्टाइनमा भने ६७ जना छन ।गत २४ घण्टाभित्र रिपोर्ट प्राप्त भएका २७ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । नेपालमा मृतकको संख्या ३ हजार ३ सय २५ पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ११४ जना आसीयुमा र ५८ जना संक्रमित भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन ।
नेपालमा आरटी–पीसीआर विधिबाट २५ लाख ४ हजार ४७६ जनाको परिक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये ५१ वटा सरकारी प्रयोगशालाले १५ लाख ६३ हजार ९१६ जनाको परिक्षण गरेका छन भने ३६ वटा निजि प्रयोगशालाले ९ लाख ४० हजार ५६० जनाको परिक्षण गरेका छन ।
मोरङ, पर्सा,काठमाडौं,भक्तपुर,चिवन,कस्की,दाङ,बाँके,रुपन्देही,सुर्खेत, र कैलाली जल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या पाँच सयभन्दा बढी छ ।
उपत्यकामा कति संक्रमित थपिए ?
बिहीबार काठमाडौंमा २७ सय ४४ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन । ललितपुरमा ५५० र भक्तपुरमा ३०१ जनामा कोरोन पुष्टि भएको छ ।
जाजरकोटमा बेपत्ता भनिएका सात जना सकुशल फेला
४ असार १२:३२
दार्जुलामा महाकाली नदीको सतह बढ्यो, सतर्कता अपनाउन प्रशासनको आग्रह
४ असार १२:०७
६ असार १०:५५
ओलीले दिएको भ्याकेटमा दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश
८ असार १६:०४
१६ डिआइजीको सरुवा, को कहाँ पुगे ?
८ असार ०६:५६